Isinyithi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
ndixelele ngekhadi levidiyo? AMD RADEON HD 7480D
Khawusixelele ngekhadi levidiyo? I-AMD RADEON HD 7480D ikhadi levidiyo elibuthathaka I-amd radeon hd 7480d ikhadi levidiyo likhadi levidiyo elibuthathaka. Ewe, ewe ayisiyomidlalo, kuphela ukujonga i-intanethi kunye ...
Akukho mkhonkco we-microphone kwi-laptop, ine-laptop ye-Lenovo
Ilaptop ayinasidibanisi semakrofoni, ndinelaptop yeLenovo, kuxhomekeke ekubeni yeyiphi ilaptop, mhlawumbi unesidibanisi sentloko kwi-wiring efanayo kunye ne-headphone kunye nemakrofoni, endinayo ...
Ayikwazi ukufikelela kwi-Safe Mode kwi-Windows 8 nge-fxnumx kutheni?
Andikwazi ukungena kwiMowudi eKhuselekileyo kwiWindows 8 ngeF8 ngoba? Kuya kufuneka ucinezele ushif + F8 Usebenzisa i "Windows Startup Options" screen (ngaphambili "i-Advanced Boot Options"), ungaqala iiWindows kwi ...
Ngaba ndingayifaka ikhadi le-2 imifanekiso?
Ndingabeka amakhadi evidiyo ama-2? Unamakhadi ama-2 ekhadi levidiyo, ukubheja, kodwa kuyanqweneleka ukuba amakhadi afane kubume bendawo, oko kukuthi, kuyacetyiswa ukuba ufumane ikhadi elifanayo ne ...
Indlela yokunika i-akhawunti yomlawuli eyakhelwe kuyo?
Ndiyenza njani iakhawunti yomlawuli eyakhelwe-ngaphakathi? yizame- Ungangena kwinkqubo phantsi kweakhawunti yoMlawuli, ekufuneka iqale yenziwe yenziwe. Qala umyalezo okhawulezayo ngokuchwetheza cmd kwi Qhuba imiyalelo ibhokisi Kuvuliwe ...
Ndixelele indlela yokwakha ikhompyutha yokudlala kwi-ruble ye-15000. Ndiyabulela kwangaphambili
Ndixelele ukuba ndiyidibanisa njani ikhompyuter yokudlala engange-15000. Enkosi kwangaphambili Ngolo hlobo lwemali, ungakha inkqubo engabizi kakhulu eza kutsala uninzi lwemidlalo kuseto oluphakathi. ngokwaneleyo ukuba ekuqaleni kukho ...
I-GeForce GTX 660M ikhadi elihlukileyo elinemifanekiso?
Ngaba i-GeForce GTX 660M inemifanekiso eyaneleyo yamakhadi emizobo? Nam ndinje ngebeech. 1: 1 isebenza njengekhompyuter eqhelekileyo. I-FPS ayitshintshanga kwimidlalo. Ikhadi linamandla, kodwa kakhulu kwaye ...
Ukuqhagamshela iphosta ngokunikezelwa kwamandla
Ukudibanisa okupholileyo ngombane, thatha nayiphi na into ebandayo, sika isinxibelelanisi kuyo kwaye ukuba ufuna sisebenze nge-100%, cofa iingcingo kwisidibanisi b. njl. - mnyama kumnyama. ...
I-Netbook iyacotha-ukwenza ntoni ???
I-Netbook iyacotha-ukwenza ntoni ??? Eyokuqala kukucoca ilaptop ngeCCleaner, ukususa imithwalo yokuqalisa engeyomfuneko kwikhompyuter, kwaye okwesithathu ukuskena ii-virus zesevisi yokuGqirha iWebhu yokuPhulukisa iWeb CureIt! Phinda ufake iiwindows (ngokukhethekileyo zicocekile iiwindows ...
UKUPHATHWA phi ukufumana ipini ye-8 yekhadi levidiyo?
UKUHLAZIYIWE apho ungayifumana khona iphini eli-8 kwikhadi levidiyo? ufuna iadaptha ye-2-pin molex (x8) kwaye yonke into izakusebenza.Ukuba isinxibelelanisi seepini ezintandathu silingana ngokukhululekileyo kwisokethi esi-8, yixhume kwaye uyiqale ...
Ikhadi leVidiyo! Ndixelele, ngu-NVIDIA GeForce GT620 2GB enhle kwimidlalo ye-2012 yonyaka?
Ikhadi levidiyo! Ngaba ikhadi lemizobo le-NVIDIA GeForce GT620 2GB lilungile kwimidlalo ka-2012? Ahhahahahahaha, i-asassin yakho ayizukugqabhuka ukusuka kwi-100%, kulungile, masithi ikhadi lilungile okanye alilunganga kuwe ...
Kukuphi ukudibanisa i-fan fan?
Ukudibanisa phi fan fan? ukuba isinxibelelanisi sefeni sikuvumela ukuba ubambelele kwibhodi yomama, jonga impendulo engentla. Ngaphandle koko, qhagamshela ii-1,2-izihlanganisi kwicandelo lokuhambisa umbane lokupholisa okupholileyo. 3- socket yomqhubekekisi ...
iifestile zafumanisa iingxaki ze drive drive
iiwindows zifumene iingxaki kwidiski ngokubanzi, zichanekile ukuqhuba itsheki "chkdsk c: / f / r" yiyo ke leyo. ukuba kukho ukufomatha kwinqanaba elisezantsi kwakhona (mhdd yeyona ndiyithandayo, kodwa ayisiyiyo ...
ICore 2 Quad Q8300. Ngaba ndimele ndithenge inkqubo enjalo yokudlala?
Ikhonkco 2 Quad Q8300. Ngaba uyayithenga iprosesa enjalo yemidlalo? Inkqubo eqhelekileyo. Imidlalo ilungiselelwe kakuhle ii-quad cores kwiWindows 7. Kodwa kwiWindows XP zimbi kakhulu. Kungcono ukuthatha ...
phi ukubona umqhubi wekhadi lakho levidiyo?
Ndingayibona phi inguqulelo yam yekhadi levidiyo? Iphaneli yokuLawula-Inkqubo-yeHardware- Umphathi wesixhobo -Iadaptha yeVidiyo (cofa kabini) -Khuphela uMqhubi kwaye ufake inkqubo ye-Everest (EVEREST Edition Ultimate ...
Izibuyekezo zakho kwii-laptops ze-dell
Ingxelo yakho kwii-laptops ze-dell ayizithathi i-asus Dell laptops zinezixhobo ezikumgangatho ophezulu kakhulu. Eyona nto ibaluleke kakhulu, izixhobo zikaDell zikhawuleza kwaye zibhetele kunezinye iimveliso zelaptop. Njengokuba,…
Ngaba ikhadi levidiyo ye-nvidia Geviece GT 440 lilungile?
Ngaba i-nvidia GeForce GT 440 ilungile ikhadi levidiyo? I-NVIDIA GeForce GT 440 inika abasebenzisi ubunyani obungazange babonwa ngaphambili kunye namanqanaba amahle eenkcukacha kubalinganiswa, imihlaba kunye nemidlalo yokudlala kwimidlalo yanamhlanje ethandwa kakhulu ...
Yintoni enokuyiphula kwi-calculator? badinga ukuphazamiseka okukhulu kwi-calculator ukuba babhale iteknoloji yamandulo
yintoni enokuqhekeza ikhalityhuleyitha? Ukuphazamiseka okunzulu kwinto yokubala kuyadingeka ukucima itekhnoloji yakudala.Izitshixo zawa, ialum yatsha, ibhodi yaqhekeka, ibhetri yavuza ibhodisi, iscreen saqhekeka. Iqhekekile kwaye iqhekekile ...
Uphi ikhadi levidiyo kwi-laptop? Iifoto ngaphakathi. Ndifuna ukuphucula. Yiyiphi ikona kunye nawuphi na icala?
Liphi ikhadi lemizobo kwilaptop? Ifoto ngaphakathi. Ndifuna ukuphucula. Leliphi ikona neliphi icala? I-lonely Vanilla Bear, ngaba uthi i-chip chip ithengiselwe ibhodi kwaye ...
Ithetha ntoni "uhlobo lomlawuli weGraphics- edibeneyo kwaye eyakhelwe ngaphakathi" ithetha ntoni?
Ithetha ntoni "uhlobo lomlawuli weGraphics- edibeneyo kwaye eyakhelwe ngaphakathi" Ithetha ntoni? Ikhadi - levidiyo. Ndathengisa i-beech kunye nekhadi levidiyo elidityanisiweyo, kodwa kwavela ukuba idityanisiwe eyakhelwe-ngaphakathi apha kwaye ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,322.